Haqa: Icciitiin mootummaa Ogeessi seeraa Batiruu Dibaabaa dabarsee kennuun itti shakkame maali? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooHaqa: Icciitiin mootummaa Ogeessi seeraa Batiruu Dibaabaa dabarsee kennuun itti shakkame maali?
Ogeessi seeraa gorsaa kantiibaa itti-aanaa duraanii magaalaa Finfinnee Injinar Taakkala Uumaa kan ture Bartiruu Dibaabaa torban tokko dura to’annoo poolisii jala ooluun isaa ni yaadatama.
(bbcafaanoromoo)—Jalqaba kan to’annoo jala oole du’a Haacaaluu hordofee namoota Jawaar Mohaammadiifi Hizqeel fa’iif odeeffannoo kennuun hokkora uumameen lubbuu namaafi qabeenya irra miidhaan akka gahu godheera kan jedhuun shakkame jedhu abukaatoon isaa Obbo Tolamaariyaam Magarsaa.
Akkasumas immoo icciitii sababa hojiitiin harka isaa gale dabarsee namoota kunneeniif kenneera kan jedhuun shakkameetu guyyaa booda akka dhiyaatuuf bellamni kennameef jedhu.
Beellamni inni lammaffaa gaafa Sanbataa 16/01/2013 A.L.I ture kan qabame. Poolisiin shakkamaan namoota biyya alaafi keessa jiran Jawaar Mahaammadiifi Hizqeel Gabbiisaaf odeeffannoo kennuudhaan icciitii mootummaa baaseera waan jedhaniif qorannoo keenya hin xumurre bal’inaan qorachuuf guyyaan dabalataa nuuf kennamu qaba, echuu gaafachuu BBCtti himan.
Abukaatoon gama isaaniin himaanni ‘icciitii mootummaa baasuu’ jedhu bu’uura seeraa akka hin qabne dubbatu.
”Gorsaa seeraa kantiibaa itti-aanaa duraanii magaalaa Finfinnee waan tureef amala hojii isaatiin icciitiin mootummaa addatti isa bira dhufu hin jiru,” jedhu.
Dhimmoota kantiibaan bu’uura seeraan gorfamuu barbaadan kennaa ture malee icciitiin addaa harka isaa gale hin jiru jedhu. ”Kanaaf waanti yakka hojjete jechisiisu akka hin jirre kaasneetu falmaa turres,” jedhan.
Otuma tahee immoo jedhu Obbo Tolamaariyaa,”waraqaan qabiinsa isaa ajaju Hagayya 2012 akka bahe qorataa poolisiirraa hubanneerra. Kanaaf yeroo dheeraaf qorannno gaggeefamaa waan tureef, yeroon dabalataa poolisiif kennamuu hin qabu kan jedhu yaada dhiyeessine,” jedhu.
Poolisiin,”waajirasaafi iddoo garagaraa sakattaanee ragaa argachuu ijaa hin dandeenyeef ragaa dhoksee iddoo biraatti yakka dalagaa tureera tilmaama jedhu qabna,” jedhu.
Abukaatoon, ”tilmaamaan namni hidhamuu hin qabu, shakkiin qabatamaa jiraachuu qaba,” jedhanii falmuu dubbatan.
Manni murtii falmii gamaasfi gamanaa erga dhaggeefateen booda galmee qorannoo poolisii ilaaluu akka barbaadu himus, poolisiin garuu galmee isaa guyyaa sanarra dhiyeessuu hin dandeenyee.
Haaluma kanaan beellama dura galmee qorannoo poolisiin falmiiwwan waliin akka qabsiisuuf gaafachuun, sanarratti hundaa’uun guyyaan dabalataa barbaachisamoo hin barbaachisuu, wabiin bahuu qabamoo hin qabu kan jedhu ajajuuf gaafa Fulbaana 20/2013tti beellama qabateera jedhan.
Batiruu Dibaabaa maal dubbate?
Ogeessi seeraa Batiruun, ani nama abukaatummaan mana murtii Oromiyaafi Federaalaa irraa hayyama qabuun hojii dhuunfaa koo hojjetaan ture. Yunivarsiitii Finfinneettis qorannoo seeraa gaggeessaa akka tura dubbatan jedhu abukaatoon isaa.
”’Jijjiiramni kun yeroo dhufu mootummaatu akkan isaan gargaaru na gaafatee jennnaan hojii dhuunfaa koo dhiisee waajira mootummaatti deebi’e,’ jedhee” jedhan.
”Ergasii boodas jijjiramichattii amanuun gaaffiin uummataa bu’uura seeraan deebi’ee jijjiiramichi galma akka gahuuf tattaafachaan ture malee yakka poolisiin dhiyeessaa jiru nan ilaallatu,” jechuus abukaatoon eeraniiru.
Inumaayyuu ogeessonni mootummaa waliin akka hin hojjenneef hamilee buusuuf dalagaa godhamaa jiru jechuun falmachaa ture jechuun abukaatoonsaa dubbatu.
‘Icciitiin jedhame maali?’
Abukaatoon,”miidiyaa tokko maqaa dhahanii, miidiyaa sana kan hogganaa jiru ministira mummeedha jechuun icciitii baase kenneera; waajira kantibaa namni hogganu nama iddichaaf dandeettii hin qabnedha jedheera,” jedhanii isa kaan immoo waan dhimma biyyaatti bu’udha jedhaniitu itti dhiisan jedhan.
Obbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'e muudame
Obbo Shimallis Abdiisaa, Pireezidanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta'e muudame Pirezdaantii IA Mootummaa Naannoo…
KFO-‘Yoo filannoo dhugaa gaggeessina ta’e marii dhugaa nu barbaachisa’